अन्तत : चीनले नै बनायो को'रोनावि'रुद्ध नयाँ खोप, मानवीय परीक्षण सफल ! -
अन्तत : चीनले नै बनायो को’रोनावि’रुद्ध नयाँ खोप, मानवीय परीक्षण सफल !
काठमाडौं । आइतबार चीनले को’रोना भा’इरस (कोभिड -१९ ) वि’रुद्ध नयाँ खोपको विकास गरेको दा’बी गरेको छ। यो खोप मानिसमा पहिलो परीक्षण भइसकेको र सुरक्षित देखिएको चाइना नेसनल बायोटेक ग्रुप (सीएनबीजी) ले जानकारी दिएको हो । रिपोर्टमा उल्लेख गरिए अनुसार यो खोपले सुरक्षित रूपमा को’रोना भा’इरस प्रतिरोधी क्षमता बढाएको पाइएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरुले यसले को’रोना वि’रुद्धको लडाँईमा एउटा आशाको सञ्चार गरेको बताएका छन् । १ हजार १ सय २० जना स्वस्थ मानिसलाई परीक्षण खोप लगाइएको र उनीहमा यसले उच्च मात्रामा रो’ग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएको कम्पनीले दा’बी गरेको छ।